बीपीको घरमा सूर्यबहादुरको सपना – साकार बनाउने सुनिल थापा ! « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
बीपीको घरमा सूर्यबहादुरको सपना – साकार बनाउने सुनिल थापा !
२४ भाद्र २०७७, बुधबार ९ : ४७ बिहान
नेपाली कांग्रेसका आदर्श पुरुष, महामानव बीपी कोइारलाको भौतिक शरिरको अवसान भएको महिना हो साउन । गएको यो महिनाको मध्यमा (१३ गते) नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालायमा आयोजित एक कार्यक्रममा राप्रपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री सुनील थापा सहितका दुई दर्जन जति पूर्व पञ्च कांग्रेसमा प्रवेश गरेका दृश्य देखिए । त्यो कार्यक्रमका प्रमुख थिए नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा । उनले नै हो यी नेतालाई कांग्रेमा प्रवेश गराएका ।
यो प्रवेश जस्तो प्रकारले गरियो गराइयो त्यसले के देखायो भने वास्तवमा नै कांग्रेसमा महाधिवेशन लागेको छ र त्यसमाथि सभापतिलाई त झनै जोडले लागेको छ । यो ठाउँमा अरु कोही प्रवेश गर्नुहुन्न भन्न खोजिएको जस्तो यस्तो अर्थ नलागोस । तर केही संयोगहरु हुन्छन् । यहाँ त्यसको केही चर्चा मात्र गर्न खोजिएको हो ।
त्यसदिन काँग्रेसमा प्रवेश गरेपछि सुनिलले भने आफ्ना पिताको सपना साकार बनाउँछु । उनले त्यसोभन्दा उनका पिता सूर्यबहादुरले के गरेका थिए भन्ने सम्झिए धेरै कांग्रेसीले ।
त्यसमा दुइवटा कुराथिए वीपीसंग जोडिएका । एउटा हो बीपीको फाँसीको माग गर्नु र अर्को बीपीको प्रस्तावको जनमत संग्रहलाई पराजित गराइदिनु । यी मध्ये सुनिलले कुनलाई भनेका होलान भन्ने उनीसंगै सोध्न पर्ला । अव उनी यो पार्टीको पदाधिकारी पनि त हुन् ।
त्यसदिन यो प्रवेश मात्रै भएन । त्यही समारोहमा उनलाई सहमहामन्त्रीको पदपनि दिए सभापतिले । सभापतिकै मनबाट उनीसित आउनेलाई केन्द्रीय सदस्य पनि दिएको बुझियो । सहमहामन्त्री भनेको पदाधिकारी हो र पदाधिकारी भनेको नीति निर्माता र कार्यसम्पादन समितिको सदस्य पनि । यतिबेला कांग्रेको औपचारिक कार्यसम्पादन समिति छैन । त्यो नभएकै बेला त्यसको काम गर्ने संस्था यही पदाधिकारीहरुको समूह हो । थापा यसकारण धेरै भाग्यमानी भए –उनले यो पार्टी प्रवेश गर्नासाथ यति उच्चतहको पद पाए त्यो पनि ठाडै, सभापतिको मनोनयन बाट ।
स्वाभाविक छ केन्द्रीय समितिको सदस्यका बारेमा त सभापतिको मनले जसलाई सम्भ्यो त्यो हुने भैहाल्यो । जसरी सहमहामन्त्री बनाउनेबारे सभापतिलाइभन्दा अरुलाई अत्तोपत्तो थिएन । झन् केन्द्रीय समितिका बारेमा त जानकारी हुने भएन नै । त्यसै कारण होला महामन्त्रीले सभापतिलाई लुकाएर केन्द्रीय सदस्य बनाउने गरेको भनी आरोप लगाएका ।
यही समारोहमा हो नव प्रवेशी थापाले भने म सूर्यहादुरुको सपना बोकेर यता आएको हूँ । बीपीको भवनमा सूर्यवहादुरको सपना यसरी साकार हुने भयो । थापा प्रवेश गरेको यो भवनको नामनै बीपी स्मृतिभवन हो ।
त्यस दिनका समाचारहरु यसरी आएका थिए –सुनिल थापा अब कांग्रेस सह–महामन्त्री । पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का पूर्वमहामन्त्री सुनिलबहादुर थापा सहित १३ जना नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उनीहरुलाई स्वागत गरेका हुन् । थापासहितका नेतालाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले माला लगाएर स्वागत गरेका हुन् ।
नेता निधिले थापालाई पार्टीमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको भन्दै उनको खुलेर प्रशंसा गरे । सभापति देउवाले थापालाई सहमहामन्त्रीको रुपमा पार्टीमा स्वागत गरेको उल्लेख गरे । त्यस दिन कांग्रेस प्रवेश गरेका थापा सहमहामन्त्री बन्दा पाँच नेतालाई पार्टी सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यको रुपमा पार्टीमा स्वागत गरेका हुन् ।
नेता थापाले पार्टी प्रवेश गरेपछि कांग्रेससँग टुटेको नाता फेरि जोड्न लागेको बताए । यस अवसरमा आफूलाई गौरव महसुस भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘म फेरि नेपाली कांग्रेससँग टुटेको नाता जोड्न आएको छु । मलाई थाहा भएसम्म मेरो बुवा पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा सायद २००८ मा विराटनगरको नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्ष भएको र पछि धनकुटाको प्रथम सभापति भएको सुनेको छु । आज मेरो प्रवेशले त्यो पुरानो टुटेको साइनोलाई जोड्न आएको छु,’ थापाले भने । आफूहरु बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति र सूर्यबहादुर थापाको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने विचारको संगममा खडा भएर कांग्रेसमा प्रवेश गरेको पनि थापाले बताए ।
थापाले राप्रपा छाडेर जान नहुने सुझावका बावजुद कांग्रेसमा प्रवेश गरेको जनाएका छन् । थापाले भने, ‘कतिले बाबुले खोलेको पार्टी छोड्नु हुँदैन भन्ने सुझाव दिए । तर त्यसबेला उहाँले अवलम्बन गरेको सिद्धान्तबाट बिचलित भएकोले पार्टी परित्याग गरी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छौँ ।’
पञ्चायतका हस्ती भनी चिनिने सूर्यबहादुर थापाको कांग्रेससँग साइनो छोरा सुनिलले भने जस्तो २००८ मा विराटनगरको नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्ष र पछि धनकुटाको प्रथम सभापतिको भन्दा भिन्न छ । यो परिचयले उनलाई यस अघिपनि चिनेनन् र अव पनि चिन्दैनन् । सुनिल पितालाई कम्तीमा काँग्रेस बृत्तमा चिनिने माध्यम दुईवटा छन् । एउटा बीपीलाई फाँसी दिने र अर्को बीपीबाट प्रस्ताव भएको बहुदलीय व्यवस्थाको समूलनष्ट गर्ने राजनीतिक अभियन्ता ।
त्यो पञ्चायतकै कारण कांग्रेसले भोगेको परिसिथतिहरु लरतरो रुपले विर्सने अवस्था हुदैन । त्यसकाबारे थापालेपनि एकपटक माफी मागे हुन्थ्यो तर यो ठाँउमा दोष नवप्रवेशी सुनलिको मात्रै होइन । जसले प्रवेश गराए तिनले नै पनि यस्तो कुरा खोजेनन् ।
नोपलको रानीतिमा उलटपलट गराउने जनमत संग्रहमा बहुदलीय पद्धतिको विरुद्धमा गरेका यताउता र बीपीलाई राजासंग मेलमिलाप गर्ने भनी स्वदेश आउदा फासी मागिएका दुई प्रसंगमा विश्लेषक शंकर तिवारीका प्रस्तुत दुइअंशले पनि योसनदर्भमा धेरै कुरा बताउँछन् ।
एक, बीपीलाई फाँसीको माग : मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केका बीपी र कांग्रेस नेता–कार्यकर्तालाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ भनेर भाषण गर्नेहरू र प्रस्ताव पारित गर्नेहरूको अग्रपंक्तिमा सूर्यबहादुर थापा नै थिए । उनी उदारवादी पञ्च देखिन खोज्थे, तर थिए अनुदार । यसरी हेर्दा आफ्नो जीवनको उत्कर्षमा कांग्रेससँग सधैं विपरीत रहेर सूर्यबहादुरको राजनीति चलेको थियो । प्रवासका अनेक हण्डर र विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समेतलाई ध्यान दिंदै र नयाँ राजा (वीरेन्द्र) लाई दुरुपयोग गर्दै देशको भविष्य नै धरापमा पार्न कस्सिएका पञ्चको बिगबिगीकाबीच राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बीपी नेपाल फर्किएका थिए ।
विद्यार्थी आन्दोलनको राप र तापमा जनमत संग्रह घोषणा भयो र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पाए ।
दुई, जनमत संग्रहमा बलमिच्याइँ : तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम बुझेका जानिफकारहरुका अनुसार, सूर्यबहादुर थापा बाहेक अर्को कुनै प्रधानमन्त्रीले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन मुस्किल थियो । सत्ताको दुरुपयोग गर्न उनले गरेका हरेक तिकडमहरूको साक्षी बस्न नसकेर (पछि नागरिक अगुवा बनेर २०४७ को अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री समेत भएका) देवेन्द्रराज पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयको सचिव पदबाट जनमत संग्रहको मुखमा राजीनामा गरेका थिए ।
चारकोसे झाडी मासेर तराईलाई मरुभूमिकरणतर्फ लैजाने कार्यको शुरुआत उनै सूर्यबहादुर थापाले गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । बीपीको भारत निर्वासन र जनमत संग्रहमा बहुदल पक्षको पराजयले नेपाली राजनीति कति पुस्ता पर धकेलियो, शोधको विषय होला तर यी दुवै घटनाको केन्द्रमा निर्विवाद रूपमा सूर्यबहादुर थापा संलग्न थिए । (क्रमशः)– सुवेदीको प्रस्तुती